shanduka Speed Pool Pump
Garandi & Service Policies
Aquagem Electric Limited ari dziva nenhumbi nokutengesa vachishandisa Panyu, Guangzhou, China. Tiri zvakatsaurirwa mukuumba uye achipa akazochena uye simba okuponesa zvigadzirwa kuti vatengi yose, kutanga, imwe shanduka Frequency nemotokari kuti kuroora nokukurumidza dziva pombi.
Basa redu kuchengeta dziva vanoshandisa kunakirwa nyore uye zvakanakira nevaye akazochena rwokugadzira uye kuderedza yedu kabhoni yakasviba rutsoka anodhinda, ichi anoshumira nhungamiro basa redu munyika dzinotsanagura R & D, kugadzira, Sales, yokutengesa & basa, etc.
Customer kuri zvose. Ose dziva mushandisi watinofanira mari-anobudirira + unhu hwakanaka + akavimbika dziva gadziriro kuitira kuti vakawanda kubva mari yavo uye vanonakidzwa mhuri dziva upenyu.
The nokutsvaka nani mutengi ruzivo ane mu zvinhu zvakafanana kakawanda convert pombi siyana uye yedu basa iri nokusingaperi kukurudzirwa pana Aquagem, zvaakatadzisa basa redu nechinangwa.
In kambani inotenderera mutengi ruzivo, hwokugadzira R & D hakuna anosara. Zvose pamusoro kutsvakurudzwa uye kuva chigadzirwa vatengi vanoda, mafungiro izvi kudzokera kunoita kuti zviri nani pfungwa utsanzi iri kakawanda inverter uye pumps tiri kukura ikozvino.
Rinotungamirirwa 6 vakuru mainjiniya vane unyanzvi vari VFD uye inverter michina, tinodada kuva simba R & D chikwata uyo akaramba kuuya pamwe itsva pfungwa.
zvigadzirwa zvose akapfuura yedu muchinyatsongwarira yepamusoro rokuongorora pamberi wakurukura, rine zvevanopesana ngura, Anti mwando, kuputira kurapwa nokuti zvemagetsi mapuranga, zvemagetsi nerevane muedzo Semi-dzapedza zvigadzirwa, kuchembera bvunzo pa 60 dhigirii chilis uye azere waivako rokuongorora pamusoro dzapedza zvigadzirwa, vatevedzere chigadzirwa mu nedanho intensification bvunzo yokureva siyana zvinoita sei chigadzirwa vakwegura mumamiriro ezvinhu chaiwoiwo.
Join Our Global Network pamusoro Distributors!